ကမ္ဘာ့စီးပွားပျက်ကပ်၏အရိပ်လက္ခဏာ - သတင်း Rule
အခါစိတ်ကျရောဂါကုသမှကြွလာ, လုပ်ဆောင်ချက်၏အကောင်းဆုံးသင်တန်းကိုတစ်ဦးရှေ့တော်၌စတင်ကြောင်းတစ်ကုသမှုအစီအစဉ်တစ်ခုဖြစ်သည် စိတ်ဓါတ်ကျဆင်းနာ​​မကျန်း အရမ်းပြင်းထန်ဖြစ်လာ.
ထိုကွောငျ့, တစ်ဘို့အရေးကြီးသောကြောင့်ဖြစ်ပါသည် လူ စိတ်ကျရောဂါများကိုအခုမှအရိပ်လက္ခဏာနားလည်တန်ဖိုးထားဖို့.
ဆွေးနွေးစိတ်ကျရောဂါ၏နိမိတ်လက္ခဏာတို့ကိုအားလှည့်သောအခါ,, များစွာသောလူဟောပြောချက်ပယ် slough, သူတို့ပါစေယောကျတညျးစိတ်ကျရောဂါ၏နိမိတ်လက္ခဏာတို့ကိုစိတ်ပူရန်မလိုပါကြောင်းနိဂုံးချုပ် အနာ စိတ်ကျရောဂါများ.
စိတ်ကျရောဂါ၏အဓိကလက္ခဏာတစ်ခုမှာရုတ်တရက်ဖြစ်ပါသည် စွမ်းအင်မရှိခြင်း. တစ်ဦးကစိတ်ဓာတ်ကျပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးနီးပါးအားလုံးအချိန်သူသို့မဟုတ်သူမ၏ကိုယ့်ကိုယ်ကိုခံစားမှု lethargic တှေ့လိမျ့မညျ.
စိတ်ကျရောဂါ၏နိမိတ်လက္ခဏာတို့ကိုတစ်ဦးအဖြစ် lethargy ၏ခံစားချက်နှင့်အတူ coupled, စိတ်ကျရောဂါနှင့်အတူညှဉ်းဆဲပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးပုံပျက်သူသို့မဟုတ်သူမ၏အိပ်ပျော်နေတဲ့အလေ့အထများကိုတွေ့လိမ့်မည်.
အခြားတဖက်တွင်မူ, ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးသမိုင်းကြောင်းအသူသို့မဟုတ်သူမ၏အသက်တာ၌သာမန်ခဲ့ထက်သူသို့မဟုတ်သူမ၏ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအိပ်ပျော်နေတဲ့ ပို. တွေ့ပါစေခြင်းငှါ.
သို့သော်ငြားလည်း, စိတ်ကျရောဂါနှင့်အတူညှဉ်းဆဲပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးသည်သူ၏သို့မဟုတ်သူမ၏ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်အိပ်မှတစ်ခက်အချိန်ရှိခြင်းရှာတွေ့စေခြင်းငှါ. (အိပ်စက်ခြင်း၏မရှိခြင်း နောက်ထပ်တစ်စိတ်ဓါတ်ကျဆင်းနာ​​မကျန်းပိုမိုဆိုးရွားနိုင်. ပုံမှန်ထက်ပိုပြီးအိပ်ပျော်လျက်နေကြသည်ကိုအဆင့်ဆင့်၏နံပါတ်ပေါ်ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦး၏ဘဝ impact နိုင်နေချိန်တွင်, ဒါကြောင့်သေချာပေါက်တိုက်ရိုက်စိတ်ဓါတ်ကျဆင်းရောဂါပိုမိုဆိုးရွားမည်မဟုတ်.
သို့သော်, ဖော်ပြခဲ့တဲ့သိရသည်အဖြစ်, အသံနှင့်သင့်လျော်သောထုံးစံ၌အိပ်နိုင်ခြင်းဖြစ်ခြင်းသိသိသာသာတစ်စိတ်ဓါတ်ကျဆင်းရောဂါလက္ခဏာများအရှိန်အဟုန်မြှင့်မည်ဖြစ်သည်။)
နှင့်ဝသကဲ့သို့ အိပ်စက်ခြင်းပုံစံများ, အစာစားချင်စိတ်နှင့်ဆက်စပ်စိတ်ကျရောဂါ၏နိမိတ်လက္ခဏာတို့ကိုနှစ်ဦးဟာအလွန်ကွဲပြားသောပုံစံများယူနိုင်ပါသည်.
အခြားတဖက်တွင်မူ, သိသိသာသာအစားအစာသူတို့ရဲ့စားသုံးမှုကိုလျှော့ချတဲ့သူစိတ်ကျရောဂါခံစားနေရကြသူလူရှိပါတယ်. ထိုရောင်စဉ်၏အခြားအဆုံးမှာ, စိတ်ကျရောဂါ၏နိမိတ်လက္ခဏာတို့ကိုတယောက် overeating နိုင်ပါတယ်, ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးကအမှန်တကယ်ဆာလောင်မွတ်သိပ်မဟုတ်ပါဘူးအထူးသဖြင့်လာသောအခါ.
စိတ်ကျရောဂါ၏နိမိတ်လက္ခဏာတို့ကိုတစ်ခုမှာအာရုံ၏ကြီးထွားလာသောမရှိခြင်းဖြစ်ပါသည် တစ်ကိုယ်ရေသန့်ရှင်းရေး နှင့်မြောကျမတို့.
စိတ်ဓာတ်ကျသောသူတစ်ဦးကလူတစ်ဦးသူသို့မဟုတ်သူမ၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးတင်ဆက်မှုအတွက်အကျိုးစီးပွားရှုံး. ဖြည့်စွက်ကာ, ဤလူကိုတခါတရံသူတို့ရိုးရိုးသူတို့ရဲ့ပုံမှန်ကျန်းမာရေးနှင့်ဖြီးလိမ်းပုံလုပ်ရိုးလုပ်စဉ်မှတဆင့်သူတို့၏လမ်းလုပ်ကိုင်ဖို့စွမ်းအင်ကင်းမဲ့ကြောင်းခံစားရ.
စိတ်ကျရောဂါ၏နိမိတ်လက္ခဏာတို့ကိုလည်းသူသို့မဟုတ်သူမတစ်ချိန်ကခံစားခဲ့ရကြောင်းလုပ်ငန်းများနှင့် pastime အတွက်အကျိုးစီးပွားဆုံးရှုံးပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးပါဝင်.
စိတ်ဓာတ်ကျသောသူတစ်ဦးကလူတစ်ဦးအရပ်ရပ်သို့ကွဲပြားနှင့် absentminded ထင်ရစေခြင်းငှါ.
22143	0 ကမ္ဘာ့စီးပွားပျက်ကပ်, အနာ, disorders, ကျန်းမာခြင်း, ဗိုလ်မှူးစိတ်ဓါတ်ကျဆင်းရောဂါ, စိတ်ကျန်းမာရေး, အိပ်, အိပ်စက်ခြင်းဟာဆင်းရဲချို့တဲ့
← ရေးသောထုတ်ဝေရန် Polanski လိင်ချေမှုန်းရေးသားကောင် အာဂျင်တီးနားတွင်အဆောက်အအုံပေါက်ကွဲမှုအနည်းဆုံးအရွက်6သေသော →